Sleeping Beauty Fairy Tale Castle, Neuschwanstein | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on March 25, 2017 March 25, 2017 by Nu Myat
စိတ်ကူးယဉ် နတ်သမီးပုံပြင်တွေ၊ ဒစ္စနေး ကာတွန်းကားတွေထဲက ရဲတိုက်ကြီးတွေဟာ အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိတာ အံ့သြစရာပါ။ ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်က ဘုရင်ဧကရာဇ်တွေဟာ သူတို့စံမြန်းဖို့ နန်းတော်တွေ၊ ရန်သူတွေတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ ရဲတိုက်တွေ ဆောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အနှံ့မှာ ရှိတဲ့ ရဲတိုက်ကြီးတွေ အနက် အလှဆုံးရဲတိုက်ကြီးကတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ နယူချန်စတိန်း ရဲတိုက်(Neuschwanstein Castle) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လှလဲဆိုရင် Disney ကထုတ်တဲ့ Sleeping Beauty ကာတွန်းကားထဲက ရဲတိုက်ကြီးကို ဒီရဲတိုက်ကြီး အခြေခံပြီးဆွဲခဲ့ရတဲ့ အထိပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီရဲတိုက်ကြီးကို နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်၊ Sleeping Beauty ရဲတိုက်လို့ အမည်ပေးထားကြပါတယ်။ ရဲတိုက်ကြီးရဲ့ တည်နေရာကလည်း ရဲတိုက်ကြီးကို အိပ်မက်ဆန်ဆန်လှစေနေတာပါ။ မြို့တော် မြူးနစ်ကနေ ၂နာရီကြာကားမောင်းသွားနိုင်တဲ့ ဖူဆန်မြို့နားမှာရှိပြီး ရဲတိုက်ကြီးပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ ရေကန်နှစ်ကန်နဲ့ ဘာဗေးရီးယန်းတောင်တန်း နောက်ခံရှုခင်းက ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
ရဲတိုက်ကြီးဟာ အပြင်ပန်းလှပခမ်းနားရုံမျှမက အတွင်းပိုင်းအခန်းတွေကိုလည်း အနုစိတ် လက်ရာမြောက်စွာ ဖန်တီးထားလေရဲ့။ လက်ရာမြောက် နံရံဆေးရေးပန်းချီကားတွေ၊ တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ ပရိဘောဂတွေနဲ့ မြင်မြင်သမျှ အံ့အားသင့်စရာပါ။ ဘုရင်ကြီး အိပ်ခန်းတစ်ခုတည်းက ပရိဘောဂတွေ နံရံပန်းပုတွေ အလှဆင်ဖို့အတွက် လက်သမား၁၄ယောက်က ၄နှစ်ကြာ အချိန်ယူပြီး ထုဆစ်ပုံဖော်ပေးခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ရဲတိုက်ကြီးက အပြင်ပန်းမှာ အလယ်ခေတ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းက ၁၉ရာစုကျမှဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ အပြင်ပန်းက ရှေးဟောင်းဆန်ပေမဲ့ အတွင်းဘက်က အဲ့ခေတ်က ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေ သုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အိမ်သာတွေ အလိုအလျောက်ရေဆွဲချတာတို့၊ အခန်းတွင်းအပူပေးစနစ်တို့၊ ရေပူရေအေးစနစ်တို့၊ လျှပ်စစ်ခေါင်းလောင်းတို၊ တယ်လီဖုန်းတို့ အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပလ္လင်ထားရာအခန်းကို နှစ်ထပ်ခေါင်မြင့်ဆောက်ထားပြီး အနုပညာလက်ရာမြောက်ပေမဲ့ ဒီရဲတိုက်ကြီးမပြီးမီ ဘုရင်ကြီးနတ်ရွာစံသွားတာကြောင့် ပလ္လင်မရှိဘဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ရဲတိုက်ကြီးက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရုံမက ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီရဲတိုက်ကြီးဟာ ဂျာမနီအင်ပါယာလက်အောက်မကျရောက်မီ ဘာဗေးရီးယန်းဘုရင့်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့စဉ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဘာဗေးရီးယန်းဘုရင်ကြီး လူးဝစ် II ရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာပါ။ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀က ဒီရဲတိုက်ကြီးရှိရာတောင်ခြေရှိ ဖခင်စံမြန်းခဲ့တဲ့ Hohenschwangau ရဲတိုက်ကြီးမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ နန်းတော်ကြီးတည်ဆောက်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တာပါ။ အသက်၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ဘုရင်ဖြစ်ပြီးနောက် ၅နှစ်အကြာ ၁၈၇၉ခုနှစ်မှာ စိတ်ကူးကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ခဲ့တုန်းက ၃နှစ်နဲ့အပြီးမှန်းထားပေမဲ့ အသေးစိတ်အနုစိတ်လွန်းတဲ့ ဘုရင်ကြီးကြောင့် ၁၇နှစ်ကြာသွားကာ ၁၈၈၆ခုနှစ်မှာ ဘုရင်ကြီး ရုတ်တရက် နတ်ရွာစံသွားတဲ့အထိ ရဲတိုက်ကြီးကို အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘ၀တလျှောက်လုံး ဒီရဲတိုက်ကြီးကို အားစိုက်ပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ရဲတိုက်မှာ ၁၁ရက်သာ စံမြန်းခဲ့ရတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
လူးဝစ်ဘုရင်ကြီးဟာ ကမ္ဘာကျော်ဂျာမာန်အော်ပရာပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ ရစ်ချတ်ဝက်ဂ်နာရဲ့ အမာခံပရိသတ်ဖြစ်ပြီး အလွန်အထင်ကြီးလေးစားခဲ့ပါသတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီရဲတိုက်ကြီးကို သူ့ကိုရည်စူးပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ Neuschwanstein ဆိုတဲ့အမည်ဟာ အင်္ဂလိပ်လို New Swan Stone (ငန်းကျောက်တုံးအသစ်)လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ၀က်ဂ်နာရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငန်းသူရဲကောင်းကို ရည်စူးပြီး အမည်ပေးထားတာပါ။ ရဲတိုက်ထဲက အခန်းတွေ၊ ပန်းချီကားတွေဟာ ၀က်ဂ်နာရဲ့ အော်ပရာပြဇာတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလွှမ်းခြုံနေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီခေတ်က လူးဝစ်ဘုရင်ကြီးဟာ ဒီရဲတိုက်အပါအ၀င် အခြားနန်းတော်တွေကိုဆောက်လုပ်မွမ်းမံခြင်း၊ အခြားသောရဲတိုက်တွေကိုဆောက်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေခြင်းကြောင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဏာထိခိုက်တယ်ဆိုကာ ဘုရင်ကြီးကို စိတ်မနှံ့သူဟုတောင် စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ ဒီရဲတိုက်ကြီးဟာ ခရီးသွားတွေဆီကနေ နေ့စဉ်ဝင်ငွေများစွာ ပြန်ယူပေးနေတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံပြီး ၇ပတ်အကြာမှာ ရဲတိုက်ကြီးကို အများပြည်သူကြည့်ရှုဖို့ ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရှက်တတ်ပြီးလူတွေနဲ့ ဝေးရာမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေလိုတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ သွားလာရခက်ခဲတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ရဲတိုက်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ ရဲတိုက်ကြီး က လှပခမ်းနားလွန်းတာကြောင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များစွာ လာရောက်လေ့လာနေပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ဧည့်သည်ပေါင်း ၁.၄သန်းနီးပါးလာလေ့လာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရာသီဥတုသာယာတဲ့ နွေရာသီလိုကာလမျိုးမှာဆို တစ်နေ့ကို လူပေါင်း ၆၀၀၀လောက်နန်းတော်ကြီးထဲ လေ့လာကြည့်ရှုလေ့ရှိကြတယ်တဲ့လေ။ ကျွန်မတို့ကတော့ ၂၀၁၀ခုနှစ် နွေဦးရာသီတုန်းက ဥရောပ၆နိုင်ငံ အလည်သွားရင်း ဒီပုံပြင်ထဲကရဲတိုက်ကြီးဆီရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီရဲတိုက်ကြီးအပြင် လူးဝစ်II ဘုရင်ကြီး ငယ်ငယ်ကကြီးပြင်းရာ တောင်ခြေရှိ Hohenschwangau ရဲတိုက်၊ ၄၅မိနစ်အကြာ မောင်းရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ ရဲတိုက်ဆောက်နေစဉ်ကာလတွေမှာ ဘုရင်ကြီးစံမြန်းခဲ့တဲ့ Linderhof နန်းတော် စတဲ့ လှပခမ်းနားတဲ့နေရာတွေပါရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရဲတိုက်နဲ့ နန်းတော်တွေအပြင် ဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်တွေအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြူးနစ်မြို့နားက Herrenchiemsee နန်းတော်ဝင်းကိုလည်း သွားလေ့လာသင့်ပါတယ်။
ကဗျာဆန်တဲ့လူးဝစ်ဘုရင်ကြီးရဲ့ ဒီနတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ကြီးဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ အလှပဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်းရာကျော်တိုင် ဒဏ္ဏာရီဆန်စွာလှပခမ်းနားနေပါတယ်။ ရဲတိုက်ပိုင်ရှင် ဘုရင်ကြီး ရေကန်ထဲမှာ သေဆုံးနေပြီး သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်း ရှာမတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေတာကလည်း ပဟေဠိဆန်လှပါတယ်။ ဒီလောက် အပင်ပန်းခံဆောက်လုပ်ထားပြီး ဘယ်သူမှ မနေခဲ့ရတာလည်း ထူးဆန်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ ဘယ်သူမှ အသုံးမပြုခဲ့ရဘဲ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ဖို့ သက်သက် ဆောက်ထားသလားအောက်မေ့ရလောက်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ရဲတိုက်ကြီးလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
This entry was posted in Europe, Heritage, Travel, Uncategorized and tagged Castle, Europe, Travel. Bookmark the permalink.
← Khao Yai, Little Italy of Thailand
Chiang Mai Doi Inthanon Trip →
One thought on “Sleeping Beauty Fairy Tale Castle, Neuschwanstein”